काठमाडौं, मंसिर १६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न विहीबार शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भीमदत्तनगर, मङ्सिर १६ । कञ्चनपुरमा एचआइभी एड्सको सङ्क्रमणबाट हालसम्म १३१ जनाको मृत्यु भइसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
आज विश्व एड्स दिवस मनाईंदै, नेपालमा ३९ हजारभन्दा बढी संक्रमित
काठमाडौं, मंसिर १६ । आज विश्व एड्स दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व एड्स दिवस मनाईंदै छ ।
काठमाडौं, मंसिर १६ । १९ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएको छ ।
डा. केसीको मागप्रति सरकारी चिकित्सक संघको समर्थन, २४ घन्टे अल्टिमेटम
काठमाडौं, मंसिर १५ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का नवनियुक्त डीनको राजीनामालगायतका माग राख्दै विगत १८ दिनदेखि अनशनरत् प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले समर्थन जनाएको छ ।
१७ वर्षदेखि ओछ्यानमा, रामबहादुरको परिवारलाई नै दशा ! (भिडियो रिपोर्ट)
धनकुटा, मंसिर १५ । सरकारले नेता तथा पहुँचदारहरुको उपचारका लागि वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ खर्चने गरेको छ । तर, पहुँच नपुग्ने दुरदराजका जनता भने उपचार खर्च अभावकै कारण ओछ्यानमै थलिन बाध्य छन् ।
डा. केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुद्वारा आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं, मंसिर १४ । १७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेको डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका आवासीय चिकित्सकहरुले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
डा. केसीका माग बारेमा मन्त्रीपरिषदमा कुरा राख्छु : मन्त्री थापा
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आज शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डा गोविन्द केसी र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. केपी सिहसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेका छन् ।
साठी प्रतिशत घरैमा सुत्केरी, धेरैलाई जोखिम
धादिङ, भोजपुर र सिन्धुपाल्चोकमा मातृ, नवजातशिशु, तथा एक वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर र त्यसका कारणका बारेमा गरिएको अध्ययनमा शिशु जन्मँदा सास फेर्न कठिनाइ २४.९५, सङ्क्रमण २२.२५, निमोनिया १०.३५ र कमतौल ४.५५ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको पाइएकोछ ।
डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन गम्भीर, आज फेरि बार्ता हुने
काठमाडौं, मंसिर १४ । सरकार र आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
‘तराईमा कुपोषणको जोखिम बढी’
काठमाडौं, मंसिर १३ । किशोरावस्था पोषण सर्वेक्षणले नेपालका ७१ प्रतिशत किशोर र ५९ प्रतिशत किशोरीमा कुपोषण रहेको देखाएको छ ।